Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah | Data Recovery
Home → Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah
Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah LC Technology
Our shaybaarka soo kabashada data waa jawi ammaan leh dhammaan xogta macaamiisha dhawray helitaanka shaybaarka gaarka loo leeyahay iyo gacanta si loo hubiyo in kaliya khabiiro ku habboon xamili warbixin xasaasi ah. si joogto ah waxaan qandaraas inuu ka soo kabsado xogta xogo dowladda, hay'adaha fulinta sharciga iyo hay'adaha gaarka ah. Technology LC waxaa caadaysteen in ay heerka gaarka ah iyo ilaalinta in lagu tilmaamay qalabka u baahan. Dhammaan waraaqaha soo kabsaday ayaa la joogto ah ku qoysay oo ka dib 30 maalmood.
ujeeddo: war Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah LC Technology International ayaa lagu qoray, isagoo ah hanuuniye in macluumaadka aan ururino ka isticmaala iyo sida aan u isticmaalno macluumaadka. Waxaan dareemayaa this u ogolaan doonaa inay go'aan ah aqoon iyo raaxo macluumaadka sahayda noo. Haddii aad qabto wax su'aalo ah ama walaac ah comments fadlan noo sheeg at Service@LC-Tech.com.
xogta dadka iyo shakhsi aan codsi
Yaan macluumaadka la wadaagaan
Statistics Tracking: LC Technology shaqeeya 4 goobaha gacanta, www.LC-Tech.com, www.LC-Tech.co.uk, www.FILERECOVERY.com iyo www.PHOTORECOVERY.us goobaha oo dhan ay ula socdaan tirakoobka. goobaha Our isticmaali Analytics raad adeegyada sida Google Analytics iyo Bing Analytics.
Adeegyadan dhalin statistics noo sida boggaga viewed, inta ay yihiin viewed, waqti fadhiga iyo tirakoobka kale. Macluumaadkan waxaa loo isticmaalaa gudaha oo kaliya si wanaagsan u maareeyaan waayo-aragnimo user.
Annagu ma daabacaan ama in si kasta sameeyaan tirakoobka dadweynaha.
Waxa laga yaabaa, liiska munaasabadda sida martida badan ama dhufatay our site ayaa maareeyay in muddo waqti la siiyo, laakiin ma macluumaad gaar ah oo ku saabsan cinwaanada IP shaqsi la sii daayay. Tani waxaa loo isticmaalaa Tirakoobka gobolka kaliya oo aan ku kaydsan, mana la wadaago.
Annagu ma iibiso xogta our qof — waxaa gudaha loo isticmaalo oo kaliya.
cookies: Waxaan kaliya u isticmaali cookies degaanka e-commerce oo ka mid ah goobta. Kukiyada waxaa loo isticmaalaa si aad ula socoto waxyaabaha gaadhi adeeganayay oo kulan iibsashada. cookies ayaa sidoo kale loo isticmaalaa in lagu caawiyo buuxinta foomamka si toos ah. cookies ma soo diri macluumaad kasta oo dhacaya in dhowr maalmood.
Dadka Macluumaadka iyo Xogta Shakhsi Waxaan Codso: Waxaan ka codsan macluumaad shakhsi ah in dhowr goobood oo ka mid ah website; marka goodhiyaha waxaa lagala soo bixi, macluumaadka la codsaday, waxyaabaha la iibsan karo, taageero farsamo oo la codsaday ama rukun ah in our warsidaha la codsaday. Oo ay la socdaan macluumaadka shakhsiyeed, waxaan sidoo kale codsan macluumaad aasaasi ah Dadka iyo / ama sharaxaad ku saabsan dhibaatada kaa haysato. Dhammaan liiska waraaqaha waa ka gaabsadeen-in iyo user Unsubscribe karaa wakhti kasta by in Unsubscribe@LC-Tech.com diraya e-Mail in la isla markiiba laga saaray.
Sidee Waxaan isticmaalaan macluumaadka la ururiyey: Macluumaad kasta oo laga soo ururiyey on our website, haddii by user soo gudbiyey ama ururiyey by server tirakoobka si adag loo isticmaalo in-guriga for falanqaynta Dadka, horumar wax soo saarka iyo waayo-aragnimo user wanaajiyey. Waxaan leeyihiin warside bil kasta taas oo ka gaabsadeen-in ay e-Mail. Waxaan sameyn ma spam ama bulk e-Mail dalabyo ama advertising mana aan iibiyo ama in qof kasta oo xisbiga saddexaad ama shirkadaha qaybiyo our liiska.
Waxaan sii dhammaan macluumaadka si adag qarsoodi ah.
Yaa Waxaan Share Macluumaadka Iyadoo: Kaliya ee labada dhinac saddexaad kuwaas oo wax u helaan macluumaad ku saabsan macaamiisheena waa Corporation First Data iyada oo ay E4 Global Gateway credit card albaab processing, oo ay la socdaan PayPal, Karbaash iyo SanDisk® Corporation. Macluumaadka waxaa loo diraa E4 Global Gateway, PayPal ama wax karbaashana, kaliya marka qofka macaamilka ah ka dhigaysa iibsi oo aan u isticmaalno albaab ah macaamilka aamin. First Data Corporation (Company Waalidka E4 Global Gateway ee) waa mid ka mid ah Processor credit card ee ugu weyn dunida oo ka hawlgasha 34 dal oo dunida ah. Waxaad ka arki kartaa macluumaad halkan. Data First ayaa hadal xaqiijin iyagu ma ay wadaagaan macluumaadka iyo in ay tahay ka gees ah siyaasadda soo saara kaarka, oo ma uu oggolaan inay wadaagaan macluumaadka kasta biilka. LC Technology dib uma celin karo siyaasad kasta by E4 Global Gateway ama Data First. Macluumaadka waxaa si toos ah uga www.LC-Tech.com diray inay SanDisk® Corporation oo keliya marka qofka macaamilka ah wuxuu kaga gatay SanDisk® RescuePRO®. SanDisk® Corporation waa mid ka mid ah soo saarayaasha ugu weyn iyo qalabka wax soo saarka kaarka kaydinta flash for kala duwan ee wax soo saarka elektaroonik ah iyo qalab digital. LC Technology International dib uma celin karo siyaasad kasta by SanDisk® Corporation.
Waa Maxay Xuquuqda aad leedahay badan Your Data:
Haddii aad tahay user diiwaangashan ama qabtid wax ah faalooyin bidix on our site aad codsan kartaa in aad aragto ama kala soo bixi macluumaadka aan kaa hayno. Sida LC-Tech.com ma qaadan comments, ama ay leeyihiin dadka isticmaala diiwaangashan, aan haysan lahayd macluumaad of sort this for booqdaha ah in download. Macluumaadka kaliya ee aan lahaa noqon lahaa macluumaadka bixisey ka buuxinta foomka codsiga qiimaynta software a, foomka codsiga taageero ah, ama qaab xiriir.
Sida caadiga ah kooxda martida ah in buuxiyey foom, data waxay noqon doontaa cinwaanka email ay, wax cinwaanada IP u yeellay waqtiga buuxinta foomka iyo xadhig wakiilka user ee daalacashada ay isticmaali. Inta kale ee xogta waa dadweynaha sida ay daabacday kooxda martida ah.
Waayo, bixinta macaamiisha, this sidoo kale ka mid noqon doona macluumaad profile iyo download, lacag, iyo taariikhda tigidhada taageero.
*** Waxa kale oo aad codsan kartaa "in la illoobi" oo aan masixi doono wixii xog ah shaqsiga lagu garan karo aan adiga kaa hayno.
Dabcan, this xogta ka saaro waxaan u baahan nahay ujeedooyin maamul ama ammaanka ama haddii aan sharcigu u baahan yahay si ay u sii haystaan ​​qaar ka mid ah macluumaadka.
Si kastaba ha ahaatee, haddii aad tahay qof macmiil ah oo bixinta ee annagaa, ka haysato laysanka software ah in la diiwaan nala, haddii aynu aad tirtirto ka our database, waxaan ma awoodi doonaan in ay aad u eegto in our database in ay si uu kaaga caawiyo in taageero farsamo awood, liisanka cusboonaysiinta, ama arrin kale. Sidaas, fadlan ogow in kuwa marka aad codsanayso tirtirka ka our database.
Waayo, muddada waqtiga la joogo, waxay khuseysaa visitors our ka Midowga Yurub, iyadoo la raacayo Xeerka Guud ee Data Protection (GDPR).
Intaa waxaa dheer, sida January 1, 2020, this sidoo kale ka codsan doonaa in ay dhawaan la soo saaro Privacy Act California Consumer.
Waxaan ka baddalayso this dheeraad ah mustaqbalka dhow.
Shaqsi ka doonaya helitaanka, ama kuwa doonaya in la saxo, hagaajiya, ama tirtirto xogta aan sax ahayn, waa in si toos ah uu iyada weydiinta / support@lc-tech.com.
Waxaan uga soo jawaabi doonaa gudahood wakhti macquul ah, not to exceed one week.
Waayo, muddada waqtiga la joogo, waxay khuseysaa visitors our ka Midowga Yurub, iyadoo la raacayo Xeerka Guud ee Data Protection (GDPR), iyo sida January 1, 2020, sidoo kale in California degan persuant u Privacy Act California Consumer.
Maxay Nidaamka Breach Data Waxaan Have In Place:
Waa in dhacdo kasta dhacaan meesha xogta macaamiisha ayaa laga badiyay, xaday, ama laga yaabo waxyeelleeyey, siyaasaddeena waa in looga digo macaamiisheena via email ugu dambayn 48 saacadood oo ka mid ah kooxda noqotaa warqabaan dhacdo. Waxaan sidoo kale u sheegi doona dhacdada sida ay u wax xujo ilaalinta xogta loo baahan yahay. Waxaan si dhow ula shaqeyn doonaan macaamiisha wax saameeyeen si loo go'aamiyo talaabooyinka xiga sida wax ogeysiin ah dhamaadka-user, iyo sida looga fogaado wax kasta oo ay dhacdo la mid ah in mustaqbalka.
Adeegga macaamiisha – Service@LC-Tech.com
cancel Times – Unsubscribe@LC-Tech.com
FirstData Contact – Riix Halkan